Archive du 20200511
171 ireo voan’ny Covid-19 Tratra ihany koa Antsirabe sy Moramanga
Niainga tamin’ny tarehimarika 158 ny 6 mey ny antontan’isa nentina ny 9 mey teo. Naverina ny fitiliana ireo 67 niteraka adihevitra.
Andry Rajoelina 5 taona handamina krizy ihany…
Herintaona sy tapany izay no lasa, saingy mbola tsy marim-pototra hatrany ny fanjakana Rajoelina. Sasatry ny mamaha olana sy krizy.
Toamasina Nitondra olona an-tsokosoko ilay kamiaon'ny miaramila
Kamiaon’ny miaramila an’ny prezidansa iray no saron’ny mpitandro ny filaminana nitondra olona nikasa ny hiazo an’Antananarivo ny faran’ny herinandro teo raha voarara tanteraka izany noho ny coronavirus.
Tena ny vahoaka malagasy tokoa ve no mafy loha sa terena sy sarihan’ny zava-misy sy volena eo amin’ny fiainany an-davanandro ?
Nidina ny vidin’ny « gaz » Mba rahoviana ny an’ny solika ?
Nisy fidinanany ny entona fandrehitra mpiasa ao an-tokantrano na ny “gaz domestique” amin’izao fotoana izao, rehefa nisy fiakarany 5000Ar teo nandritra ny fihibohana.
Firaisamonim-pirenena Mangataka ny hanemorana ny fiverenana an-dakilasy
Eo anatrehan’ny fitotonganan’ny zava-misy manodidina ny valanaretina COVID19 indrindra ny fiakaran’ ireo ankizy tratry ny aretina, ny fikambanana
Fahazoan-dàlana manokana hivezivezy Tsy manan-kery intsony manomboka anio
Nandray fanapahan-kevitra ny fanjakana fa tsy hanan-kery intsony manomboka anio 11 mey amin’ny 12ora atoandro ny fahazoan-dàlana hivezivezy navoakan’ny CCO Covid-19 sy ny minisiteran’ny Fitaterana (MTTM),
Miditra an-tsehatra ny Praiminisitra "Tsy ekena ny filalaovana ny ain'olona..."
Vaky ny adin’ny fanjakana sy ny Institut Pasteur… Nampanantsoin’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny Mahazoarivo ny avy amin’ny Institut Pasteur de Madagascar na ny IPM noho ilay ahiahina antontan’isa nivoaka ny alakamisy teo.
Kilasy hanala fanadinana Miaina anaty savorovoron-tsaina ny ray aman-dreny
Ao anatin ny fahasahiran-tsaina tanteraka ireo ray aman drenin ireo zaza hanala fanadinana indrindra ireo kilasy madinika hanala CEPE amin izao fotona izao. Ao ny milaza fa tsy handefa ny zanany aloha.
Mihorohoro i Brickaville Lehilahy iray ahiana ho nanaparitaka Covid-19
Lehilahy iray mpiasan’Ambatovy monina ao Ambohijafy Toamasina no nanatitra razana tany Andovoranto Brickaville ny Alamisy 7 mey lasa teo.
Tsapan-kevitra tamina olona 1299 23,7% no efa nisotro CVO, 76,3% nanao Tsia
Nanao tsapan-kevitra na “sondage” mahakasika ny fisotroana tambavy covid organics ny Agence Capsule Madagascar izay efa “certifiée ISO 20252”,
Resaka Covid 19 Nifampidinika ny sehatra tsy miankina sy ny OMS
Namory ireo sehatra tsy miankina eto amintsika mikasika ny trangan’aretina coronavirus sy ny fiantraikan’izany eto amintsika ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS.
Tambavy CVO Mampitandrina ny ANSM
Misintona lakolosy ny ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) manoloana ireo voalaza fa ho fanafody entina miady amin`ny COVID-19.
Tiana Andria - House of Madagascar “Ampitomboy ny fitiliana faobe”
“Miiba dia miiba ny fiainam-bahoaka na ny fandraharàna sy ny toekarena eto Madagasikara.
Alakamisy Fenoarivo Hentitra ny fampiharana ny lalàna
Nasaina niverina avokoa ireo bisikileta, moto, fiara 'olon-tsotra na fiara mpitatitra ny faran'ny herinandro lasa teo.
Faritra atsinanana Nidina ifotony ny BIS
Tato ho ato dia anisan` ny faritra nahitana fitomboana haingana be ny valanaretina “coronavirus” indrindra ny tranga fifampikasohana (cas contact) any amin`ny faritra Atsinanana.
Ambodin'isotry Mifanaretsaka toy ny mahazatra ny olona
Toy ny andavanandro ny fiainan ny mponina eny ambodin isotry rehefa tsenan ny sabotsy.